Mahabodhi Parahita – Run by RRYBS Literacy Mission
Run by RRYBS Literacy Mission
ကင်ဆာရောဂါ ပညာပေး ဟောပြောပွဲ
၅-၁၂-၂၀၁၄ နေ့ အထူးတရားပွဲ MRTV4သတင်း
ပထမအကြိမ် ကထိန်သင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူ ဒါန်း
သီတဂူဆရာတော်၏ အထူးတရားပွဲ MRTV4 သတင်း
၆ ကြိမ်မြောက် အင်္ဂလိပ်စာ အထူးသင်တန်း
Sixth Intensive English Course
ပထမအကြိမ် သာသနာ့မြေအလှူ ရေစက်ချပွဲ
ဒုတိယအကြိမ် သာသနာ့မြေအလှူ ရေစက်ချပွဲ
MRTV4သတင်း
ကျောက်ကပ်လူနာ (၈) ဖွဲ့ အိမ်ပြန်
Saturday, February 11, 2017 at 3:01 pm |
Bodhisukha School (An International English Medium School) Affiliated to CBSE.(အိန္ဒိယ ဗဟိုအစိုးရ အသိအမှတ်ပြု စာသင်ကျောင်း) အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာလကတ္တားမြို့၊ ဗောဓိသုခပရဟိတ-မြန်မာကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဒေါက်တာ နန္ဒောဘာသမှ ဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော Bodhisukha Read more >>>
ဦးရဲမြင့်+ ဒေါ်အေးစန္ဒာရွှေ မိသားစု မြန်မာငွေ ၁၀ သိန်း လှူ ဒါန်း
Saturday, January 14, 2017 at 2:48 pm |
နှစ်ဖက်သော အဖေအမေအဖိုးအဖွား ညီအကိုမောင်နှစ်မဆွေမျိုးများ၊ ဆရာ ဆရာမများအား အမှူးထား၍ ရန်ကုန်မြို့ နေ ဦးရဲမြင့်+ဒေါ်အေးစန္ဒာရွှေ မိသားစုမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကိုးလ်ကတ္တားမြို့ ၊ ဗောဓိသုခပရဟိတမြန်မာကျောင်းတိုက်အတွင်း ဆောက်လုပ်နေဆဲ ဗောဓိနိဝါသ ကျောင်းဆောင်အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၀၀ နှင့် မြန်မာငွေ ၁၀ သိန်းတို့ကို သဒ္ဓါထက်သန်စွာ လှူ ဒါန်းပါသဖြင့် ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ သာဓုခေါ်ဆိုအပ်ပါသည်။ စေတနာရှင် မိသားစု ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေကြောင်း အမြဲဆုတောင်းယင်း- မေတ္တာဖြင့် ဆရာတော် Read more >>>
Mahabodhi School Annual Function
Saturday, January 14, 2017 at 2:11 pm |
Mahabodhi Society, Bangalore, was established in 1956 by the most venerable Acharya Buddharakkhita. The main objects for which the Society was founded are to put into practice and to teach Read more >>>
ဦးရန်ချန်းယုံ+ဒေါ်ရန်စိုက်ဖိန်း မိသားစုမှ ဗောဓိနိဝါသ ကျောင်းဆောင်အတွက် ရူပီးငွေ ၃၃၀၀၀ လှူ ဒါန်း
Sunday, January 8, 2017 at 1:48 pm |
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကိုးလ်ကတ္တားမြို့ရှိ မဟာဗောဓိပရဟိမြန်မာကျောင်းတိုက်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘုရားဖူးခရီးသည်များ၊ ပညာတော်သင် လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ရဟန်းသံဃာများ၊ ကျန်းမာရေး လာရောက်စစ်ဆေးသူများ ၀င်ထွက်နားခိုရာ ကျောင်းတော်ကြီး တစ်ကျောင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့-မြောက်ဖျား ဒေသမှ ကျန်းမာရေး လာရောက် ကုသသူများ၊ ဘုရားဖူးများ နားခိုရာ နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ နေရာထိုင်ခင်း အခက်အခဲရှိနေပါသဖြင မဖြစ်မနေ ဗောဓိနိဝါသ အမည်ရှိ Read more >>>
ဦးလောကိန်းထင် မှ ဗောဓိနိဝါသ ကျောင်းဆောင်အတွက် ရူပီးငွေ ၆၆၀၀၀ လှူ ဒါန်း
Sunday, January 8, 2017 at 8:07 am |
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကိုးလ်ကတ္တားမြို့ရှိ မဟာဗောဓိပရဟိမြန်မာကျောင်းတိုက်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘုရားဖူးခရီးသည်များ၊ ပညာတော်သင် လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ရဟန်းသံဃာများ၊ ကျန်းမာရေး လာရောက်စစ်ဆေးသူများ ၀င်ထွက်နားခိုရာ ကျောင်းတော်ကြီး တစ်ကျောင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့-မြောက်ဖျား ဒေသမှ ကျန်းမာရေး လာရောက် ကုသသူများ၊ ဘုရားဖူးများ နားခိုရာ နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ နေရာထိုင်ခင်း အခက်အခဲရှိနေပါသဖြင့် မဖြစ်မနေ ဗောဓိနိဝါသ အမည်ရှိ ကျောင်းဆောင်ကြီးကို ဆောက်လုပ်နေရခြင်းဖြစ်သည်။ ရာတော် ဒေါက်တာ နန္ဒောဘာသ ဦးစီးတည်ထောင်လျက် ရှိသော Read more >>>
ဦးထွန်းထွန်းဦး+ဒေါ်နှင်းနှင်းအေး မိသားစု အခန်းတစ်ခန်း လှူ ဒါန်း
Sunday, January 1, 2017 at 9:12 am |
နှစ်ဖက်သော မိဘများအား အမှူးထား၍ အမှတ် (၄၉၃-A)၊ ဇာနည် (၁၄)လမ်း၊ (၉ ) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ၊ ရန်ကုန်မြို့ နေ၊ ဦးထွန်းထွန်းဦး+ဒေါ်နှင်းနှင်းအေး၊ သမီး မစုယမင်းထွန်း မိသားစုမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကိုးလ်ကတ္တားမြို့ ၊ ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒောဘာသ ဦးစီး တည်ထောင်လျက်ရှိသော ဗောဓိသုခ ပရဟိတ မြန်မာကျောင်းတိုက်အတွင်း ဆောက်လုပ်ဆဲ ဗောဓိနိဝါသ ကျောင်းဆောင်၌ Read more >>>
ဆရာမ ဒေါ်ခင်စန်းနွယ်၊ ဒေါ်ဝင်းဝင်းဌေး တို့မှ အခန်းတစ်ခန်းဖိုး လှူ ဒါန်း
Saturday, December 31, 2016 at 7:19 am |
ကျေးဇူးရှင် ဖခင် ဦးထွန်းရွှေ၊ မိခင် ဒေါ်စိန်ရင် တို့အား ရည်စူး၍ သမီး ဆရာမ ဒေါ်ခင်စန်းနွယ်၊ ဒေါ်ဝင်းဝင်းဌေး တို့မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကိုးလ်ကတ္တားမြို့ ၊ ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒောဘာသ ဦးစီး တည်ထောင်လျက်ရှိသော ဗောဓိသုခ ပရဟိတ မြန်မာကျောင်းတိုက်အတွင်း ဆောက်လုပ်ဆဲ ဗောဓိနိဝါသ ကျောင်းဆောင်၌ အခန်းတစ်ခန်းဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ တိတိကို Read more >>>
Budhisukha School (BDS SCHOOL)
Mahabodhi Parahita @ all right reserved 2016.
Developed & Maintenance by: Ninjara-themes.com